I-China ACCURL 8 Axis CNC Plasma Cutting Machine ngePipe & Tube iphrofayli yomshini wokusika wePlasma Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Accurl
I-ACCURL 8 Axis CNC Plasma Pipe Cutting Machine ngomshini wePipe & Tube wePlasma Cutter
Ukuthuthuka okubaluleke kakhulu kubuchwepheshe bokusika i-Pipe plasma buchaza kabusha lokho okungenziwa yi-plasma.
I-ACCURL®Abakhiqizi bemishini yokusika i-plasma Pipe plasma ukusebenza okuphezulu imishini yokusika ipayipi ye-plasma eyakhelwe isivinini nokunemba. Ulayini wethu wemishini yokusika ipayipi yakhelwe ukusika amapayipi asukela ku-300mm kuye ku-630mm ububanzi. Umshini wethu ngamunye wokusika amapayipi we-CNC ungalungiselelwa ukusika i-plasma, ukusika i-oxy-fuel noma kokubili.
Ophakamisa usetha ubude bokubhoboza kokuqala futhi agcine ukuphakama kwetotshi-kwepayipi ngesikhathi senqubo yokusika nge-voltage regulation. Lokhu kugcina ukucacisa okuhle nekhwalithi yezingxenye zakho ezisikiwe.
Izinhlelo ze-Hypertherm zeHyPerformance plasma zinikeza ukusika kwekhwalithi ephezulu kakhulu futhi okuqonde kakhulu embonini.
Isinamathiseli sentsimbi sentsimbi sisiza ukusikwa kwama-weld preps emaphethelweni wepayipi.
Umshini wePlasmacutting umshini unedizayini eyingqayizivele yekhanda. I-chuck emithathu yomhlathi eguquguqukayo ivumela ipayipi ukuthi iqondaniswe kalula futhi igxile ekusikeni. Ukukhishwa kokushisa okushisayo kuphelile ngokusebenzisa i-chuck ne-headstock kusistimu yokukhipha intuthu yezimboni. Lo mklamo oyingqayizivele ukhulisa umkhiqizo futhi ugcina indawo yokusebenza ehlanzekile nephephile.
Umshini wePlasmacutting wawakhiwe ngeqoqo lothuli engqondweni. IHornet Cutting Systems neRoboVent ziletha izinhlelo eziphelele. Sobabili siklama, sakhe, sifake, futhi sigcine amasistimu wokunikeza lula nokulawulwa komthombo owodwa. Izinkontileka zeHornet Cutting neRoboVent zokwenza ukufakwa kwabaqoqi ukuqinisekisa ukuthi kwenziwa kahle.
• Yenza i-valve ye-gas decompression valve ne-gauge ye-pressure.Sula ukuhlola yonke ingcindezi yomshini.
• Hlakulela u-U71 ujantshi osindayo ngomshini omuhle.
• Ngokuya ngemfuneko yomsebenzisi, hlanganisa ilangabi elilodwa le-CNC ilangabi, isibani sombhali esisebenza ngamandla, isitampu sokunyathela, isibani semishini ye-plasma noma umugqa
isibani sokusika esiphindwe kathathu, futhi futhi silingana ne-auto igniter nesilawuli sokuphakama okuzenzakalelayo.
• Ukuqinisekisa ukuthi umuthi awukhubazeki, waklanywa ngesakhiwo esiyisikwele, ushisiwe ukuze uqede ukucindezelwa ngomshini, bese kusetshenzwa
ngokunemba imishini.Inamandla aphezulu wokukhanda nokuqina okuhle.Ukunemba okuphezulu nokugaywa komzila wesitimela, isondo lamagiya kanye ne-gear rack
ikhwalithi ephezulu yensimbi ihlanganiswe ngaphezulu kwesigxobo.Ngakho-ke, ukunemba kokuhamba kwe-latcral kungaqinisekiswa.
eboshelwe ugongolo ukuze kube lula ukushintshwa nokulungiswa.
• Isetshenziselwa ukuhanjiswa kwekhebula le-tracheal kwesibani sokulawula ukusika isibalo, kungasebenza ngokuqhubekayo ngaphandle kokudala ukukhathala kwemishini.
• Ukufeza ukunyakaza okuvumelanayo kwamapuleti amabili asekelayo ngensimbi yensimbi.
• I-master drive eyinhloko ifakwe isondo eliqonde phezulu ukugcina inkombandlela ezinzile isebenza.Kunokususwa imvuthu ezinhlangothini zombili zeshalofu lokushayela.Bangakwazi ukusula ujantshi wesikhombi.
• I-Beam isebenzisa i-Q345B welding square steel tube structure nge-stress release by tempering, inamandla amakhulu nokuqina.
• Ngemuva kokuchazwa ngobuciko kobuso, i-crossbeam inokuqina okuhle nokunemba okuphezulu nokusabalalisa ukushisa okuhle kakhulu.
• Umkhiqizo ulungele imishini nganoma yiziphi izinhlobo zezinhlelo ze-CNC.
Langaphambilini I-ACCURL 500w Fibre Laser Cutting Machine Eco-fiber Series
Olandelayo: I-ACCURL 1500W i-Laser Tube Cutting Machine Yokuthengisa Tube Pipe Laser yensimbi yokusika umshini
Ziyini amanani akho?
2.Do unayo ubuncane oda ubuningi?
3.Ngabe ungakunika imibhalo efanele?
5.What izinhlobo izindlela zokukhokha ingabe ukwamukela?
6.Yini iwaranti yomkhiqizo?
7.Ingabe uqinisekisa ukulethwa okuphephile nokuvikelekile kwemikhiqizo?
8.Kanjani ngemali yokuthumela?
Umshini wokusika we-Plasma Plasma
Ukusika Umshini wePlasma
Plasma Cutting Imishini
Umshini wokusika we-Plasma Cnc ephathekayo
Umsiki Wamanzi Jet Plasma